Rotary valve waxaa si weyn loogu isticmaalaa qalabka sida boodhka, miisaanka elektaroonigga ah iyo mashiinnada ballaarinta kuwaas oo ku jira habka wax soo saarka calafka sida diyaarinta, daaweynta, burburinta, isku dhafka, xajinta, ballaarinta, baakadaha iyo kaydinta alaabta ceeriin. Waxaan bixinaa rota...
Waxaanu u qaabaynaynaa oo aanu soo saarnay valve rotary kiimikaad iyadoo loo eegayo sifooyinka guban kara, walxaha qarxa, sunta iyo waxyaalaha daxalka ah ee ay sii daysay warshad kiimikaad. Wax soo saarka kiimikaad, dhexdhexaadku caadi ahaan waxa uu leeyahay cadaadis sare iyo heerkulka. Marka loo eego dabeecadda...
Iyadoo horumarinta joogtada ah ee shuruudaha dadka ee badbaadada cuntada, waxaan samaynay cilmi-baaris qoto dheer iyo horumarinta warshadaha kala duwan ee cuntada. Oo waxaanu naqshadaynaa oo aanu soo saarnay badeecooyin ku salaysan Heerarka Badbaadada Cuntada Qaranka iyo Heerka Nadaafadda Guud ee Cuntada
Waxaan siinaa adeega hal-joojin ee mashruuca hadhuudhka ee macaamiisha sida adeegyada nidaamsan oo ay ku jiraan naqshadaynta, rakibida, hagaajinta iyo aqbalaadda. Waxaan si gaar ah u diyaarinaa bariiska, daqiiqda iyo injineerada saliidda si ay u bartaan sifooyinka codsiga ee valve rotary ee vario ...
Mashiinnada dawooyinka iyo qalabku waxay door muhiim ah ka ciyaaraan habka wax soo saarka, iyo dareere ahaan, doorka valve rotary ee xidhitaanka hawada, agabka gudbinta ayaa sidoo kale muhiim u ah warshadaha waaweyn ee dawooyinka. Laga bilaabo walxaha, habka, qaab-dhismeedka iyo EH...
Macdanta sida sibidhka, lime, dambaska ciidda, alunite inta badan waxay leeyihiin sifooyinka qallafsanaanta iyo adkaanta sare. Marka rotary valve loo isticmaalo in lagu qaado dhammaan noocyada kala duwan ee alaabta macdanta, waxay soo bandhigtaa shuruudo sare oo loogu talagalay xoogga qalabka farsamada iyo xirashada caabbinta....
Xakamaynta Elektarooniga ah, 3 Way Ball Valve, quudiyaha rotary, hawo xidhid, valve rotary, 3-Way weeciye Valve,